Amaqanda aqhephukile namazambane kanye ne-zucchini anama-prawn | Bezzia
Amaqanda aqhephukile namazambane kanye ne-zucchini anama-prawn
UMaria vazquez | 12/09/2021 10:00 | Amasaladi nemifino
Mangaki zokupheka nge-zucchini ngabe siphakamisile kuleli hlobo? Futhi namhlanje sengeza okunye encwadini yethu yokupheka, lokhu Amaqanda aqhekeziwe namazambane kanye ne-zucchini anama-prawn okumbalwa abazokwazi ukumelana nakho. Futhi izitsha ezibonakala zilula yizo esivame ukuzijabulela kakhulu.
La maqanda aqothukile namazambane, i-zucchini nama-prawn akuthathi imizuzu eyi-10, kepha ngeke kukwenze uzivalele ekhishini ihora elilodwa futhi. Noma kunjalo, umphumela uwufanele futhi leyo yinhlanganisela yamazambane abhakiwe no-anyanisi omnandi, ithenda le-zucchini kanye nama-prawns anosawoti afakwe ku ukhilimu olunikezwa iqanda, yenza lokhu kudla kube ukukhetha okuyishumi.
Ungayiphaka ngesidlo sasemini, uhambisane nesaladi noma isidlo sakusihlwa njengesitsha esisodwa. Ingabe i- indlela ehlukile futhi ekhangayo yokwethula i-zucchini Ngicabanga ukuthi ungakholisa ngisho nabenqena kakhulu le mifino. Ingabe uzokufakazela?
Amazambane ama-2, ahlutshiwe asikiwe (ubuningi be-4mm).
1 anyanisi omhlophe kuJulienne
I-zucchini eyi-1 emaphakathi isikiwe kancane
I-120 g yama-prawn ahlutshiwe aluhlaza
Amaqanda angama-3-4 wamahhala
Sika izingcezu zamazambane ngesigamu, ngezinyanga eziyizigamu, bese sauté esikhwameni esikhulu kuze kube cishe ithenda, ivusa kaningi ukuze ingashisi / inganamatheli.
Ngemuva engeza u-anyanisi bese ususa eminye imizuzu embalwa ngaphambi kokungeza izingcezu ze-zucchini ezisikwe phakathi, ezinyangeni ezinhlanu, njengamazambane. Saute konke kuze kube yilapho i-zucchini isethenda.
Ngenkathi i-zucchini ipheka, kwelinye ipani elinamafutha amancane Imibala ebomvu ensundu.
Lapho i-zucchini ithambile, isizini, engeza ama-prawn uhlanganise ne-spatula.
Ekugcineni, engeza amaqanda, wephule izikhupha, gxuma bese usetha ukunambitha.
Jabulela amaqanda aqhekeziwe asanda kwenziwa namazambane kanye ne-zucchini ngama-prawn
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ungadliwa » Amasaladi nemifino » Amaqanda aqhephukile namazambane kanye ne-zucchini anama-prawn